Ubomi buhle uKate Middleton
UKate Middleton ngoku uyaziwa ngokuba nguCatherine Elizabeth, iDuchess of Cambridge, umfazi wecandelo likaCambridge, uWilliam.
UKate wazalwa ngo-1982 ngoJanuwari 9 kwisixeko sokuFunda, kwintsapho kaMichael Francis Middleton kunye nomkakhe uCarop Elizabeth. Abazali beDuchess badlala umtshato ngo-1980 ngoJuni 21 kwicawa yendawo yaseDorni, eBuckinghamshire. Baye basebenzisana ndawonye kwimbambano yenkampani, kwaye badibana. U-Elizabeth usebenze njengomlindi wendiza, kwaye uMichael wasebenza njengomlawuli wezithuthi zomoya.
Umama weDuchess wazalwa ngo-1955 ngoJanuwari 31. Iintsapho zabo babe ngabameli beqela eliqhelekileyo lokusebenza. Basebenza kwimizi kwisebe laseDurham. UBawo Keith wazalwa ngo-1949 ngoJuni wama-23. Intsapho yakhe yavela eLeeds, eWest Yorkshire County.
Ukongeza uKate, kukho abanye abantwana ababini kwintsapho. Aba nguJames William noFilip Charlotte, abo bathiwa nguPippa. UCatherine wakhulela kwidolophana waza wafunda esikolweni sabucala saseMurborough, kwaye emva kokugqweswa kwakhe waqala ukufundisisa kwiYunivesithi yaseSt. Andrews kwingingqi yaseWiltshire.
Sekuqaleni ngo-1987, intsapho yaseMiddleton yavula "inkampani ye-Party Pieces" ye-mail-order order, yaphumelela ngempumelelo kwimarike yaseBritani kwaye ngenxa yoko yaba yizigidigidi. Emva koko, yonke intsapho yahlala endlwini enkulu kwidolophana yaseBucklebury eBerkshire.
Ngo-1984, ngoMeyi, intombazana yayineminyaka emibili kuphela ubudala, kwaye kunye kunye nosapho ayefudukela kwi-capital yaseJordani, uyise wathunyelwa apho. Ngaphambi kuka-1986, intsapho yahlala apho. Xa uKeitby iminyaka emithathu, waqala ukuya e-Amman kindergarten. Kwaye xa ebuyela eBurkhshire, waqala ukuya esikolweni waza wafunda khona de kube ngu-1995. Emva koko, le ntombazana yaqhubeka nemfundo kwiikholeji kwaye yafumana isatifiketi semfundo, eyayibeka isibini kwisincomeko sayo. Waphumelela ngokuphumelelayo iimviwo kwi-biology, ubugcisa kunye ne-chemistry. Kwikholeji, uCatherine wayeyintombazana ehambahambayo, wayebandakanyeka kwiimidlalo, kwaye wayedla phezulu, edlala iHockey, i-tennis kunye netball. Ngaphezu koko, ngexesha lokufunda kwakhe, i-future princess iphumelele kwiprogram yeDuke yase-Edinburgh yeyona golide ephezulu.
Intombazana yadlala ihockey kwiqela leyunivesithi kwaye yenza iintlobo ezahlukahlukeneyo zemidlalo kulo lonke uphando lwakhe, kwaye yathatha inxaxheba kwimicimbi yothando. Ngokomzekelo, ngo-2002 wayenomdla wokubonisa kwiYunivesithi yaseScottish St. Andrews kwaye wayenqambi ngengubo evulekileyo, uthe wathengiswa nge $ 104,000 kwintengiso yaseLondon.
U-Kathryn waphumelela kwiikholeji zekholeji kwaye ngo-2005 wathola idiploma eneentlonelo zesibini, i-specialty - "imbali yobugcisa." Emva koko, waqala ukusebenza njengenkampani yomzali yeCandelo leMidlalo. Le nkampani inxaxheba ekuhanjisweni kweempahla zeeholide ngeposi. Ngonyaka ka-2008, uKeith, ngaphakathi kwenkampani, waqalisa le projekthi "Imihla Yokuqala Yokuzalwa". Ngenkampani yeMiddleton, le ntombazana yenza iimkhankaso zokuthengisa, yenza ukwakhiwa kweencwadi zekhathalo kwaye zazisusa iimveliso. Ngo-2006, ngoNovemba, ngaphezu komsebenzi wakhe oyintloko, wayenomsebenzi wexeshana kwisebe lokuthenga elidumileyo kwi-Jigsaw chain store eLondon. Ngonyaka kamva, iindaba zaqala ukubonakala kumaphephandaba malunga nokuba uKatherine uya kushiya umsebenzi kwiiJigsaw ukuze athathe iifoto ngokuzenzekelayo aze akhe umsebenzi. Kwiinyanga ezimbalwa kamva, wachaza ukuba wayezimisele ukuthatha izifundo ezizimeleyo kumfanekiso wezithombe ezizenzele iifoto ezidumile zakwa-Princess Diana kunye naye ngokukhethekileyo. Kuthiweyo kumaphephandaba ukuba uKate noMario baqaliswa yiNkosana uWilliam.
Ngo-2005, i-Ibritan tabloids yehlabathi yabhala ukuba uNkosana uWilliam wayenomhlobo, uKate. Iindwendwe ezitsha zeempapasho ezihamba phambili zehlabathi zihlotshiswe kunye neefoto ezidibeneyo ezithathwe ngexesha elinye. Ngenxa yokuba iintatheli zihlala zibeka iliso kwaye ziphazamise ubumfihlo bakhe, kwafuneka ziphendule kummeli. IYunivesithi kaKate noWilliam bafunde ubugcisa kunye, kodwa ke inkosana yatshintsha ubuchule bayo kwaye yaqala ukubandakanya kwi-geography. Eminye imithombo ingxelo ithi ngonyaka wakhe wokuqala, uWilliam wayefuna ukushiya isikolo, kodwa uKate wamcela ukuba ahlale. Kwaye ezinye iimpapasho zithi inkosana yaqhubeka ifunda kwiingceba zikayise uPrince Charles.
Xa uMiddleton efumene ngokusemthethweni isimo somhlobo weNkosana uWilliam, waqala ukuza kwiihloko apho intsapho yasebukhosini ithatha inxaxheba. Emva koko, ngo-2006, ngomhla we-15 kuDisemba, wayehamba kunye nabazali bakhe kwisigidi sokugqiba iziqu zeRoyal Military Academy, esagqitywa yiNkosana uWilliam. Kwaye uEstre Elizabeth II naye waya kwindibano.
Ukususela ngo-2002, uWilliam noKate, xa bebehlala bengabangani, baqalisa ukuqesha indlu eFife ukuba bahlale ndawonye, ​​ukususela ngo-2003 baqalisa ukuqesha i-cottage yelizwe. Ngeli xesha, baqala ukulwa. Xa uKate noWilliam bekhe bahlala e-yunivesithi, bahamba ngamaxesha amaningana kunye, kwaye ngo-2003 isikhulu samema amantombazana kunye nabahlobo abathandana naye ngenxa yokuzalwa kwakhe, waza waba ngu-21.
Ngo-2005, uCatherine waphumelela kwizifundo zakhe zaseyunivesiti, wafumana i-bachelor degree kwaye wayedla ngo-Prince William. Kwaye kwabakho amahemuhemu abo babesenza. Nangona kunjalo, uWilliam wangena kwiRoyal Military Academy eSandhurst, noCatherine waqalisa ukusebenza kwivenkile yokugqoka i-Jigsaw. Emva koko wahlala kwindawo yaseLondon yaseCentral.
Ngo-2007, uWilliam wathunyelwa kwinkampu yoqeqesho eKorset, kwaye intombazana yaqhubeka ihlala eLondon. Ku-Kate, intatheli zaqala ukunyusa kwaye ngenxa yoko ngo-2007 ngo-Ephreli zabonisa ukuba uWilliam noKate baqhekeka.
Ehlotyeni kwaloo nyaka, amaphephandaba amemezela ukuba intsha yesikhulu kunye nekamva elizayo liye lahlaziywa, kuba ngoJuni babehlangene ngokuhlwa, okwakulungiswa kwinqanaba lempi apho uWilliam wayekhonza khona. NgoJulayi, isibini sasihlala kunye nekhontathi ye-gala ekhunjulwe kwiNkosana Diana yaseWales. , kodwa ngelo xesha iimithombo ezisemthethweni azange ziqinisekise le ngcaciso malunga nokuhlanganisana kwebini.
Ngo-Agasti, wonke umntu wayesazi ukuba uKate noWilliam bathetha ukuhlaziya ubuhlobo babo.
Ngo-2010, ngomhla kaNovemba 16, uClarence House wamemezela ukuba uKate Middleton wayebandakanyekile kwiNkosana William. Auzhe ngoNovemba-23 ngo-11: 00 bamemezela umhla womtshato.
Ngo-2011, ngo-Aprili 29, uKate watshata nomzukulu wabo bonke owaziwayokazi waseBrithani uElizabeth Elizabeth II, uNkosana uWilliam. Batshata eWestminster Abbey. Abantu abangama-1900 beza kwiirekhodi zabo, bezalamane, abahlobo, abapolitiki kunye nabadumileyo.
Ngomhla wokubhiyozela, uKatherine wakhonza iingubo ezimbini zomtshato. Kwesinye sawo waya ngaphantsi kwekhisithi, kwaye kwelinye, waya kwidlo isidlo somtshato. Iingcali zomeleleyo zathandwa yile nto kwaye yatshwankqiswa. Isambatho somtshakazi, esasenzelwe umthendeleko, sasisuka kwisiqhelo saseBrithani u-Alexander McQueen. Yaye isambatho sesibini yenziwe ngumdwebi waseBrithani-umyili wefestile kunye no-stylist uBruce Oldfield, owathi waqala ukuthatha inxaxheba ekuphuhliseni i-wardrobe ye-Princess Diana.
Kuphela abantu abadumileyo, abanomdla kunye nabazityebi babemenyiwe kwimibhiyozo. Kuloluhlu oluhloniphekileyo nguDavid Beckham nomkakhe, umlawuli weGuy Ritchie, umculi uElton John, umlingisi uRowan Atkinson, owaziwa nje ngokuba nguBean Bean, usenobungane kakhulu nonina lomyeni.
Inkulu-mali yaseBrithani ifumene imali eninzi ngenxa yomtshato kaKate Middleton kunye nendlalifa kwi-Prince Crown Prince William. U-Queen of Great Britain, uElizabethe II, wanika intsha isihloko esithi Duchess of King of Cambridge.
Ngo-2011, phakathi nomnyaka kwiphephancwadi le-InTouch, inkcazelo yabonakala ukuba i-duchess yayikhulelwe, kodwa akukho mntu uqinisekisile le ngcaciso.
Kodwa ngokweendaba zakutshanje zale nyanga ngo-Matshi, kwaziswa ukuba le nto isibini esihlala kwisiqithi sase-Anglesey eWales naseKate sele sele sineenyanga yesihlanu yokukhulelwa baze bathi bakulindele intombi yakhe.
Umlingisi u-Irina Muraveva
Biography kaSophia Loren
Umlingisi uMaria Aronova, i-biography
I-saladi yenkukhu kunye ne-asparagus, i-courgettes kunye nama-mushroom
Indlela yokupenda ubomvu ekhaya
Ukuhlwayela ikhalenda ngo-Matshi 2017 - Itheyibhile yeentsuku ezifanelekileyo zokuhlwayela kwirejista yenyanga yomyezo wegadi-ngoJatshi
3 ukunakekelwa kwindlu yangasese eVictoria Boni: zama, kulula!
20, 30, 40, 50 - pluses of age ngalinye
I-Vegetable stew kunye namazambane kunye neklabishi
Ukupheka kwemifuno yeRashiya yokutya